Tirada dhimashada weerarkii huteel Naasahablood oo gaartay 17 qof - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaTirada dhimashada weerarkii huteel Naasahablood oo gaartay 17 qof
June 26, 2016 Abdi Omar Bile Somalia, South-Central 0
Dad qof dhaawac ah ka qaadaya goobta qaraxa. (Sawirka: Idaacada Goobjoog)
Muqdisho-(Puntland Mirror) Tirada dhimashada qaraxii loo adeegsaday gaariga oo shalay oo Sabti ahayd lala beegsaday huteelka Naasahablood ee Muqdisho ayaa gaartay 17 qof, sida uu sheegay afhayeenka wasaarada amniga, Cabdikaamil Shukri.
Maleeshiyada al-Shabaab ayaa sheegatay masuuliyada weerarkaas shalay oo Sabti ahayd lagu qaaday huteel Naasahablood.
“Waxaanu weerarnay huteel kaasoo ay badanaa dagaan xubnaha dowlada,” afhayeenka howlgalada militariga u qaabilsan maleeshiyada al-Shabaab Cabdulcasiis Abu Muscab ayaa sidaa u sheegay wakaalada wararka Reuters.
Weerarkan ayaa noqonaya kii labaad oo Muqdisho ka dhaca bil gudaheed wuxuuna daba socday kowdii Juun weerar ay maleeshiyada ku qaadeen huteel Ambassador kaasoo ay ku dhinteen 16 qof oo ay ku jireen labo xildhibaan.
Dagaalyahanada al-Shabaab ayaa waxaa Muqdisho ka saaray sanadkii 2011-kii ciidamada AMISOM iyo kuwa dowlada Soomaaliya, si kastoo ay ataahaba, waxay sii wadeen weerarada joogtada ah oo u jeedkoodu yahay wax yeelaynta dowlada uu caalamka taageero.
September 22, 2016 Madaxweynihii hore ee dowlada federaalka Soomaaliya Shiikh Shariif oo Muqdisho tagay
September 8, 2016 Dablay hubaysan oo labo nabadoon ku dishay magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud
Death toll rises to 17 in Mogadishu car bomb blast
Sargaal sare oo katirsanaa Al-Shabaab oo isku dhiibay dowladda federaalka Soomaaliya
Muqdisho-(Puntland Mirror) Sargaal sare oo katirsanaa Al-Shabaab ayaa isku dhiibay dowladda federaalka Soomaaliya, sida ay sheegeen ilo-wareedyo katirsan haayadaha ammaanka. Sargaalka is dhiibay ayaa magaciisa lagu sheegay Aadan Cabdi Maxamed oo loo yaqaan “Aadan Cobe”, [...]